I-B2B iPodcasting 101 | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 14, 2011 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Njengoko unokuba sele uqondile, sinomdlalo werediyo weveki nganye odlala rhoqo ngolwesiHlanu ngentsimbi yesithathu. Sebenzisa IBlogTalkRadio, Umboniso ugcinwe kwindawo yokugcina izinto kwaye i-podcast ityhalelwa kwi-iTunes. Ngaphandle komgangatho weaudiyo, iBlogTalkRadio iyaqhubeka ukugqitha kulindelo lwam.
Njengoko ujikeleza i-Intanethi ingcebiso malunga nepodcasting, kukho iitoni zolwazi kwisoftware enje nokuzithemba or Igadi ukuphuhlisa iaudiyo yakho, abadlali abaza kungena kwindawo yakho, izixhobo oza kuzithenga, emva koko kuya kufuneka ubambe ngokubhalisa kunye nokulayisha ipodcast nganye kwi-iTunes. Lo ngumsebenzi omninzi kakhulu kwiqela lethu… IBlogTalkRadio sisisombululo esipheleleyo.
NgeBlogTalkRadio, yonke into esiyifunayo imakrofoni elungileyo kwaye skype ukunxibelelana neendwendwe… awudingi nezo, unokucofa nje ngefowuni yakho kwaye ukulungele ukuya! I-BlogTalkRadio ikhupha i-switchboard entsha, ekuvumela ukuba ulawule ngokulula umboniso wakho, iindwendwe zakho, kunye nesandi esongezelelweyo sokungenisa. Ukongeza, i-BTR ikuvumela ukuba udibanise umboniso wakho ne-Facebook kunye ne-Twitter ukuze ubonise izaziso ezithunyelwa ngokuzenzekelayo zikhokelela bonisa (into entle).
Njengomboniso we-B2B, iqhinga lethu lahluke mpela kwimiboniso enxulumene nomthengi:
Asikho emva kwamanani aphezulu abaphulaphuli… sifuna ukukhula kubaphulaphuli abancinci bezentengiso kunye neengcali zeshishini.
Silandela ukuthengisa kunye neenkokheli zetekhnoloji ukunxibelelana nazo kumdlalo. Ayililo kwaphela iqhinga lokuba namagama amakhulu kumdlalo kubaphulaphuli abaninzi, ikwalicebo lokuqinisekisa ukuba amagama ethu akhankanywa ngokufanayo kwizangqa ezifanayo.
Silandela iingcali zentengiso ezisebenza kwimibutho emikhulu. Ngamanye amagama, sijolise kubathengi abanokubakho kwimiboniso! Oku kunokuvakala kukubi, kodwa kuyasebenza ngokupheleleyo. Siza kuqhubeka nokuzisa iinkokheli zentengiso kunye neenkampani zeFortune 500 kumdlalo. Bayakuxabiseka bobabini ngabaphulaphuli kwaye basinike nethuba lokwazisa esikwenzayo kubo.
Kuba i-podcasting ayilulanga, ababhali abaninzi, iibhlog, kunye neenkokheli zeshishini ziya kulitsiba ithuba lokuba kumdlalo. Azikho zininzi ii-podcast phaya njengoko kukho iiblogs… ke ithuba lokumanyelwa liphezulu kakhulu. Kungumdla wabo (kunye nowakho) ukufikelela kule miboniso.
Oko bekutshiwo… asitsali mntu kumdlalo ukuze sizithengise nzima. Sinika abaphulaphuli ukuba bazikhuthaze ngokwabo, inkampani yabo kunye nesicwangciso sabo kunye nokubonelela ngengcebiso okanye incoko malunga nayo. Ukuba undwendwe luyayivuyela ingxelo yethu, kuhlala kukho ithuba lokuqhubeka nolwalamano ngaphandle kweintanethi.
Sichonga iithagethi zePodcast ngu:
Ukubonelela ngefom yoqhakamshelwano kwibhlog yethu. Iingcali zonxibelelwano noluntu zinxibelelana nathi mihla le ngemigangatho-uninzi lwazo ngamathuba amahle womboniso.
Fumana iibhlog ngokusebenzisa ukukhangela ibhlog, Iposi kwaye Itekhnoloji abathetha kwizihloko ezifanayo.
Fumana ezinye iiPodcasters kwiinkqubo ezinje iTunes kwaye Stitcher.
Fumana ababhali kwiincwadi ezisandula ukukhutshwa ngezihloko esithetha ngazo. Ababhali bahlala bezama ukukhupha igama kwiincwadi zabo kwaye iiPodcasts zinika ithuba elihle. Uninzi lwababhali luya kutsiba ngeli thuba. Fumana indawo yabo kwaye uqhagamshele kunye nabo.
Khuthaza umboniso nge ukudibanisa inkqubo kanomathotholo kwibhlog yakho kunye namaphepha ezentlalo. Iipodcast zinika ithuba elihle lokuba abantu basebenze kwaye baphulaphule… into engaboniswanga yiblogi. Ukuphulaphula Kwakhona linyathelo elikhulu ukusuka ekufundeni… kuba usiva ilizwi lakho. Inokunceda abaphulaphuli bakho bakhe ukuthembana nawe ngokukhawuleza.
Jun 15, 2011 ngo-9:35 AM
Uyawuthanda umboniso wakho, awunakuhlala uwubamba bukhoma, ke kumnandi ukukhuphela iipodcasts, kwaye umamele xa ndinexesha.
Bendisenza ipodcasting ndisebenzisa irekhoda ebanjwe ngesandla kunye neAudacity okwethutyana, kodwa iBlogTalk Radio ilula kakhulu. Ndisahlela inkqubo yokugqibela phambi kokuba ndiyilayishe kwi-itunes kwaye ndiqalile ukubandakanya ikhonkco kwezinye zeenkqubo ezidumileyo kwizindululo zethu.
Siza kufunda kuni njengoko sizama ukwakha abaphulaphuli kwinkqubo yethu yamashishini amancinci ngoLwesithathu ngo-10:30.